Yemunharaunda: Gadzira Desktop Dhatabhesi Kuvandudza uye Kubvumirana Yako WordPress Siti | Martech Zone
Kana iwe waita yakawanda yekuvandudza kweWordPress, iwe unoziva kuti kazhinji zvinowanzo shanduka uye nekukurumidza kushanda pane yako desktop desktop kana laptop pane kugara uchifanira kunetseka nezve kubatanidza uri kure. Kumhanya dhatabhesi renzvimbo kunogona kutorwadza, hazvo… sekumisa MAMP or XAMPP kutanga webhusaiti yero webhusaiti, gadzirisa mutauro wako wepurogiramu, uye wozobatana kune database yako.
WordPress iri nyore nyore kubva pakuona kwekuvaka… inomhanya PHP uye MySQL pane NGINX kana Apache Server. Nekudaro, kukanda rese webhu dhizaini dhizaini pane yako laputopu inogona kunge iri toni yepamusoro ... tisingataure kunyatso kudzidza maitiro ekutanga webhu server, kuvhura iyo dhatabhesi server, uye kubatanidza izvo zviviri!
Yemunharaunda: Imwe Dzvanya WordPress Kuisirwa
Yemunharaunda inogadzira yemunharaunda WordPress saiti mhepo yakazara, saka haufanire kunetseka nekumisikidza iwe pachako. Kamwe kubaya uye yako saiti yakagadzirira kuenda - SSL inosanganisirwa! Rondedzero yezvinhu yakanaka zvisingaite!
Site Services - Wemuno, OS-nhanho PHP, MYSQL, webhu sevhisi masevhisi. Gadzira mafaira kune yega PHP shanduro, NGINX, Apache, uye MySQL zvese zvakafumurwa kugadzirisa.
Site Management - Hot-chinja pakati NGINX kana Apache, PHP shanduro (5.6, 7.3 uye 7.4 pamwe Opcache), uye Site URL. Log mafaira kune yega PHP shanduro, NGINX, Apache, uye MySQL zvese zviri nyore kuburitswa.
Clone Sites - Ese mafaera, dhatabhesi, kumisikidzwa, kusanganisira iyo Saiti URL inogona kuchinjika zvakachengeteka uye kuumbika.
Kugadzirisa - nekukurumidza debug PHP (Xdebug inowanikwa kubva ku Wedzera-ons Raibhurari)
Tunnel yeHTTPS - Zvitupa zvekuzvisainira zvinogadzirwa zvega zvesaiti. Basic saiti tunnels yakapihwa naNgrok, anoramba aripo ma URL ane akakwirira ekubatanidza miganho, bvunzo stripe webhooks, PayPal IPN, uye Zororo APIs
WordPress Multisite - tsigiro ye subdomain uye subdirectory kumisikidza nekamwe-kudzvanya kuti uenzanise subdomain kune inomirira faira.
Saiti Blueprints - chengetedza chero saiti sepurani yekushandisa zvakare gare gare. Ese mafaera, dhatabhesi, mafaira ekumisikidza, uye marongero emunharaunda anozodzoreredzwa.
Export / Export - inosanganisira saiti mafaera, dhatabhesi, mafaira ekumisikidza, mafaera egi, uye marongero emunharaunda. Bvisa mafaera kubva kune zvaunotumira kunze senge zvinyorwa, maPSD, .git madhairekitori, nezvimwe.
tsamba - MailHog inosanganisirwa kutora chero email inobuda kubva kuPHP sendmail yekuona uye kugadzirisa (izvi zvakare zvinoreva kuti iwe unogona kuyedza maemail uchinge usiri online).
SSH + WP-CLI - Nyore midzi SSH kuwana kune ega masayiti. WP-CLI yakapihwa, ingo nyora "wp" mushure mekuvhura saiti SSH.
tsigira - inosanganisira maCommunity Foramu, in-app rutsigiro, uye tikiti.
Sync uye Dzorera kubva kuNzvimbo kuenda kuFlywheel kana WPEngine
Kunyangwe zvirinani, yako yemuno muenzaniso inogona kuendeswa uye kuwiriraniswa kune imwe inonakidza WordPress yakabata kuitisa masevhisi:
Shandisa WordPress - to Flywheel kubudisa, Flywheel staging, kana ku WP Engine
MagicSync - mafaera chete akachinja anozoratidzwa kana uchifamba pakati penharaunda.
Yemunharaunda yakanyatso kusunungurwa na Flywheel!
Kuzivisa: Isu tiri mubatanidzwa we Flywheel (yedu saiti inoitirwa pano!) uye WP Engine.
Tags: apacheconfigdebug wordpressshandisa wordpresskubhururukakusimudzira kwenzvimbolog fileschemagnicPHPmhanya wordpress yemunosendmailbvumidza wordpresssynch wordpressWordPressWordpress mapuraniwordpress hostingwp-cliwpengine